‘जनताले जे चाहन्छन्, त्यसै अनुसार हुन्छ’ [अन्तर्वार्ता]
जनकपुरधाम - सीके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन’मा चन्दन सिंह केन्द्रीय सहजकर्ता हुन् । सिके राउत थुनाबाट छुटेपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्झौता हुँदै गर्दा र राष्ट्रिय सभागृहमा हस्ताक्षरसहित सहमतिभई सार्वजनिक हुने बेला सिंह पनि राउतसँगै थिए ।
सिंह राउतका अत्यन्तै निकट मानिन्छन् । उनै सिंहसँग लोकान्तरका प्रतिनिधि अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
सरकारसँग तपाईहरूले गरेको सम्झौतालाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?
– मधेशी जनता उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छ । यो धेरै सकारात्मक कुरा हो । मधेशका समस्यालाई इङ्गित गर्दै सबै समस्या समाधान गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । मधेशका जनताका लागि ठूलो उपलब्धी भएको छ ।
गठबन्धनले ‘स्वतन्त्र मधेश’ मुद्दालाई पूर्णतः छाडेको हो त ?
– मुद्दाको समाधानका लागि सम्झौता भएको हो । लोकतन्त्रमा कुनै पनि समस्या लोकतान्त्रिक विधिबाट नै समाधान हुन्छ । लोकतान्त्रिक विधि र लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुन्छन् ।
जनताको मतबाट, जनताको विचारबाट जनताद्वारा नै कुनै समस्याको समाधान गरिन्छ । त्यसैलाई लोकतान्त्रिक विधि भनिन्छ । त्यसैले हामी त्यहीँ लोकतान्त्रिक विधिको परिधिमा रहेर अगाडि बढ्छौं । जनताले हामीलाई जुन स्तरमा स्वीकार्ने छन्, त्यहीँ स्तरमा मधेशको समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्ने छौं ।
अब तपाईंको रणनीति संसदीय राजनीति गर्ने हो कि संसदलाई उपयोग गर्दै स्वतन्त्र मधेश मुद्दा अगाडि बढाउने हो ?
– संसदमा जानै हुँदैन भन्ने कुरा त लेखिएको छैन । संसदमा जानु भनेको कुनै अन्याय त हुँदैन । त्यो कुनै जुलुम पनि होइन ।
अब हामी संसदमा पनि जान्छौं । अन्य तहमा पनि जान्छौं । ती सबै कुराहरू टुंगो लगाउन हामी राष्ट्रिय परिषद्को बैठक गर्दैछौं । चैत्र ४ र ५ गते बैठक बस्दैछ । त्यहाँबाट ठोस निर्णय हुनेछ ।
हाम्रो यति ठूलो संगठन छ, विना राष्ट्रिय परिषद्को बैठकबाट महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिँदैन । मधेशका २० वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो एउटा राष्ट्रिय परिषद् धेरै पहिलेदेखि छ ।
त्यो राष्ट्रिय परिषद् बैठकमा मुख्य रुपमा के–के कुरामा छलफल हुनेछ ?
– सम्झौता गरेपछि एउटा नयाँ मोड आएको छ । हामीले एउटा नयाँ स्ट्यान्ड बनाएका छौं । अब नयाँ रणनीति तहत (अनुरुप) हामी अगाडि बढ्छौं ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई अब तपाईंहरूले स्वीकार गरिसक्नुभयो, हैन ?
– संघीयताको विरोध हामीले कहिल्यै पनि गरेनौं । संघीयता मात्रै समाधानको बाटो नभएर अन्य पनि उपाय छन् भनेर भन्दै आएका छौं । गन्तव्यसम्म पुग्नका लागि विभिन्न बाटोहरू हुन सक्छन् । एउटा मात्र बाटो हुन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि ! राजनीति भनेको पनि त्यहीँ हो । त्यसका विभिन्न बाटोहरू हुन्छन् । मधेशका नाममा यसअघि धेरैले धेरै सम्झौता गरेका छन् । तर मधेशलाई के उपलब्धी भएको छ ?
तपाईंहरूको अबको राजनीति केका लागि हुनेछन् ? अर्थात् कुन–कुन मागमा आधारित राजनीति हुनेछ ?
– सम्झौताको १ बुँदादेखि ११ बुँदासम्म हाम्रो मागहरू प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसैको विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने सबै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
सीके राउतप्रति सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएपछि डराएर सम्झौता गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् नि ?
– जहाँ एक्सट्रीमको राजनीति चलिरहेको हुन्छ, त्यहाँ प्रतिबन्ध पनि लाग्छ, खुला पनि हुन्छन् । यो प्रक्रिया चलिरहन्छन् । माओवादीको जनयुद्धका बेलामा पनि त्यस्तै भएको थियो र त्यहीँ माओवादी रुपान्तरण भएर कहाँसम्म आइपुग्यो, त्यो पनि हामीहरूले देखिरहेका छौं ।
त्यसैले राजनीतिमा कतिबेला कुन कोर्स कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन । तत्कालै त्यसको विश्लेषण पनि गर्न सकिँदैन । जनताले जे चाहन्छन्, त्यसै अनुसार हुन्छ ।
त्यसो भए तपाईंहरूले आफ्नो कोर्स परिवर्तन गरिसक्नुभयो ?
– कोर्स परिवर्तन गर्नु नै ठूलो अपराध त होइन । हामीले जनताको म्यान्डेड लिएका छौं । जनताको विचार हामीले सर्वेक्षण गरेका थियौं । मूलधारमा आउनुस् भनेर जनताले हामीलाई विचार दिएको थियो ।
त्यहीँ सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार हाम्रो नेता डा. सिके राउतले सम्झौता गर्नुभएको हो । कुनै पनि निर्णय गर्नुभन्दा पहिले डा. साहवले सर्वेक्षण गर्नुहुन्छ, त्यसमा आएको तथ्यांकको विश्लेषण गर्नुहुन्छ । त्यसैले हामीले सम्झौता गरेका हौं ।
सम्झौता गरेपछि तपाईंहरूले आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई के निर्देशन दिनुभएको छ ?
– हाम्रा समर्थक, कार्यकर्ता र शुभचिन्तकसँगै लाखौं जनतालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने डा. सीके राउतको नेतृत्वमा भएको सम्झौता हाम्रो लागि धेरै ठूलो जित हो । मधेशका लागि धेरै ठूलो उपलब्धी हो ।
तपाईंहरू निश्चिन्त रहनुस् कि अब हामी अगाडि बढ्छौं । राज्यले धेरै कुरा स्वीकार गरिसकेको छ । हाम्रो परिषद् सकिएपछि सबै कुरा प्रष्ट पार्नेछौं ।
म जिम्मै लिन्छु, भदौ २६ को निर्णयबाट स्थायी कमिटी य...
प्रदेश सरकारले केन्द्रले भन्दा १० गुणा बढी काम गरेक...
तस्लीमा नसरीन भन्छिन्– अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन मुसलमानले पनि चन्दा दिनुपर्छ
गाँजाको धुलो सहित ५० वर्षीय राजकुमार पक्राउ
१ लाख ७० हजार रुपैयाँ चोरी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ
माघ १० गतेदेखि १६ गतेसम्म सहिद दिवसका कार्यक्रम तय